DHL 50 bu onye hiwere ulo oru ulo oru ndi aru oru ugbo elu - RayHaber
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulDHL 50 bu onye guzobere ulo oru ndi oru ugbo elu
26 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 34 Istanbul, 49 Germany, Europe, ỤWA, General, Ụlọ elu, Ụzọ Awara Awara, Mpaghara Marmara, Turkey 0
onye guzobere mpaghara njem ngwa ngwa ikuku
DHL 1969, nke ndi enyi ato guzobere na 50 n'echiche nke ibughari akwukwo ibu nke ugbo ala site na ngwongwo aka ha. na-eme ememe afọ ya. Dịka onye nnọchi anya ngwa ihe ohuru na ọkara narị afọ, ụlọ ọrụ ahụ asụala ụlọ ọrụ ọrụ taa ma na-aga n'ihu na-eme ka azụmaahịa ụwa na netwọkụ ya na mba na mpaghara 220.
N’oge na-adịghị anya ka Neil Armstrong tọgasịrị ụkwụ n’ụbọchị, Adrian Dalsey, Larry Hillblom na Robert Lynn zụlitere echiche echigharị nke ibughari akwụkwọ mbufe ụgbọ mmiri site na iji aka. Nke a pụtara na usoro nke ibubata ihe maka ngwa ahịa ga-ebido tupu ụgbọ mmiri ahụ erute ebe ha na-aga, wee si na ya na -echechi ọdụ ụgbọ mmiri. Ebumnuche ahụ mekwara ka mmalite nke ụlọ ọrụ ohuru, njem ụgbọ elu mba ụwa ngwa ngwa na njem pụrụ iche nke DHL.
50 Deutsche Post DHL Group, nke ghọrọ otu n'ime ndị isi ụlọ ọrụ ngwa agha na ụwa ugbu a, na-arụ ọrụ iji mee ka ndụ ndị mmadụ na-adị kwa ụbọchị na nke onwe ya na njikwa ngwa okike na njem njem. John Pearson, onye isi nke DHL Express, bụ 50 nke ụlọ ọrụ ahụ na ụlọ ọrụ na-ebugharị ngwa ngwa ikuku. Na ntule ya
Olarak Dị ka ụlọ ọrụ, anyị nwere obi ụtọ ịhụ na anyị enweela mmetụta na-adịgide adịgide na mpaghara ahụ na ọtụtụ ọrụ anyị mepụtara ruo taa. Anyị na-anwale ma mejuputa teknụzụ ndị na-agbanwe agbanwe iji mee ka usoro nnyefe na mbufe dị ka o kwere mee yana iji kwado ndị ọrụ anyị n'achụmnta ego ha. Na mgbakwunye na iji eziokwu ndị mejupụtara ya na ihe ndị na-eme ka ikuku dị n'ụdị ọkọnọ, enwere m afọ ojuju mgbe m chọtala ụzọ ọhụrụ m ga-esi ebugara ebe ndị a ga-eweta ike. Dịka ọmụmaatụ, ngwugwu ngwugwu DHL anyị kwụsịrị iji mee ka anyị nyefe ọgwụ ngwa ngwa n'àgwàetiti dịpụrụ adịpụ na Ọdọ Mmiri Victoria, ndị ahịa na China na-enweta akwụkwọ ndị dị mkpa ugboro abụọ kwa ụbọchị. Na mgbakwunye, StreetScooter, nke anyị mepụtara ma mepụta n'onwe anyị, enyerela anyị aka ịme ihe mbụ iji dozie nsogbu ndị dị n'ihu mpaghara ngalaba lọjistik na nchebe gburugburu ebe obibi.
Pearson: "Afọ a, anyị ga-akụ ngụkọta narị nde 1 gburugburu ụwa"
N'ịkọwapụta na Deutsche Post DHL Group na-arụkwa ọrụ ọsụ ụzọ na nchebe gburugburu ebe obibi, Pearson metụtara ebumnuche efu efu na 2050 wee kwuo, "Ihe omume a dị mkpa n'aha otu anyị sitere na ebumnuche abụọ na-achọ oge anyị setịpụrụ onwe anyị maka afọ 2025 na Zero Emission. X XXX dị ka akụkụ nke atụmatụ nkwado anyị. Enwere m obi ike na anyị ga-enwe ike iru ya nke ọma maka ọtụtụ mkpọsa na ihe omume ebido dịka akụkụ nke ụbọchị ncheta anyị. 2050. Anyị haziri ọtụtụ ihe n'ọtụtụ obodo n'ime oke emume afọ anyị. Maka anyị, ka osi dị, ihe kacha pụta ìhè n’afọ bụ mkpọsa osisi Bryan Adams dị ka akụkụ nke njem “inehụ Ìhè”, nke anyị so ya bụrụ ndị ọrụ mmekọrịta ndị ọrụ. Onwe anyi choro i attitudeomi ezi ihe banyere nchedo ihu igwe; Na mmekorita ya na Bryan Adams, Arbor Day Foundation, Plant-for-the Planet, WeForest na Were Root, anyị kwere nkwa ị kụọ osisi maka tiketi tiketi ọ bụla a na-ere. N'afọ a, anyị ga-akụ otu nde osisi gburugburu ụwa. ”
Lassen: “50. Otu n'ime ndị kasị mkpa investments anyị afọ na Turkey "
The DHL Express Turkey CEO Claus Lassen ha, ha malitere arụmọrụ ke 1981 na Turkey, si 38 ha nwere afọ nke akụkọ ihe mere eme, "Ebe ọ bụ na ya inception ka a facilitator nke zuru ụwa ọnụ ahia, anyị na-ejikọta Turkey ka ụwa. Company na-ebupụ fọrọ nke nta na-enye sara mbara ngwaahịa na ọrụ na-eme ka ọ dị mfe dị ka na-azụ ahịa na Turkey. Na mgbakwunye, ụlọ ọrụ anyị 50 zuru ụwa ọnụ. afọ mgbe ememe, anyị ụtọ na anyị ga-arụ otu n'ime ihe ndị kasị mkpa investments na Turkey. Anyị na-emeghe imepe ebe ọrụ ọhụrụ anyị na ọdụ ụgbọ elu Istanbul, nke bụ ntinye ego nke 135 nde na ngụkọta, a na-arụkwa ugbu a.
DHL's 50 afọ
DHL, 2019 1969 bụ ụlọ ọrụ guzobere site na ndị ọchụnta ego atọ na San Francisco na 50. Afọ Ọhụrụ. DHL mebiri usoro nke ngalaba izizi ọdịnala site na ọrụ ọhụụ na-amachibido iwu nke blọ akwụkwọ ikike iji nyefee akwụkwọ site na ikuku n'ime obere oge. Kemgbe ahụ, DHL etolitewo n'ime ezinụlọ zuru ụwa ọnụ nke ụlọ ọrụ DHL nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 220 puku ndị ọrụ na mba na mpaghara, na-ekpuchi usoro ọrụ niile nke sajist na ọrụ njikọ. 380 nke ndị ahịa na-eweta ihe ngbanwe na nke ihe ngbanwe nke ihe ọkụkụ abụrụla nkụpụta maka ihe ọhụrụ n'ime afọ niile; Site na DHL 50, otu n'ime kọmputa nhazi okwu mbụ na ụwa, sitere na DHL Group, nke Deutsche Post DHL Group mepụtara, rue StreetScooter, emebere njem, gburugburu ebe ana-enyere ndị mmadụ aka site na ọkụ eletrik, DHL, na ntinye onwe ya iji nweta mmelite "1000" site na otu ahụ ruo 2050. na-aga n'ihu na-eduzi mpaghara ọrụ lọjistik.
ShipsGo, Digital Platform of the Container Transport Industry, Na-agba ya afọ atọ 11 / 03 / 2019 Turkey mbụ digital shipsgo Maritime n'elu ikpo okwu nke agba ya n'arọ nke-atọ ka nke a izu. Foreign ahia ụlọ ọrụ, ibu forwarders ma guzosie ike n'ihi nzube nke na-eje ozi akpa ụgbọelu n'elu ikpo okwu na-eji ihe karịrị 160 mba. Ebe ọ bụ na March 11 2016 eje ozi azụmahịa afọ, na-amụba ka ọnụ ọgụgụ na àgwà nke ọrụ na afọ gara aga 1. Dokuz Eylul Technology Development Mpaghara ya R & D-eme na n'ihi kpughere na "octopus" nnukwu data nchịkọta tinye aha ya ekele na mbụ algọridim dabeere, ọrụ; ọ nwere ike inye obere ego, oge nfe na ọnụọgụ ụgbọ mmiri ole na ole. ShipsGo nwekwara ntinye ntinye na njem ụgbọ mmiri ...
Ndị nnọchiteanya nke TCDD Transport and Logistics Sector zutere 15 / 12 / 2016 Lọjistik Industry n'Ụzọ Kwekọrọ na Representatives nke Turkish State Railways Transport: Turkish State Railways na okporo ígwè iga rụọ na-eje ozi na lọjistik ụlọ ọrụ, ibu n'ụgbọala emepụta na na enye, na DTD UTIKAD isi zutere na Ankara. December 9 2016 ụbọchị nke nzukọ e na Ankara Transport TCDD General Manager Kurt Veys, nnyemaaka General Manager Mehmet Uras na ngalaba isi gara nzukọ. N'okwu mmalite nke nzukọ, Veysi Kurt; 14 2016 June na ụbọchị, pasent nke TCDD Transportation ka ihu malitere ije ozi dị ka a ala-ekesịpde ụlọ ọrụ, ihe ndị kasị mkpa na ogbo nke liberalization usoro TCDD Transportation kwupụtara dị ka abụ mmalite nke ọrụ. Gaa n'ihu
Ọdịnihu nke Turkish Transport Sector na Digitalization 09 / 05 / 2019 Dị ka Transport Sector Outlook 2019 akụkọ site KPMG kwadebe ụwa aku na uba na ahia ibu mere a siri ike na iji nwayọọ ibu atụmanya na Turkish njem oru, ekele ya ala ebe na mgbanwe nke aku na uba si mba ọzọ ahia ga-alanahụ 2019 ala. Otú ọ dị, dị ka akụkọ ahụ si kwuo, na-eme ka ọrụ dị mma na mpaghara ahụ, nkà na ụzụ ọhụrụ na-agbanwe ngwa ngwa. KPMG Turkey kwadebere site Transport Sector Outlook usoro nke akụkọ, na-egosi ndị na-atụ anya aku slowdown n'ụwa nile na 2019 ga-emetụta ndị ụgbọ oru. Dị ka akụkọ ahụ si kwuo, ọnụ ọgụgụ na ọnụego mgbanwe na ọnụahịa mmanụ na oge ikpeazụ emeela ka nrụgide dị ukwuu na mpaghara ahụ. Site na nmetụta nke ejighị n'aka zuru ụwa ọnụ ugbu a, ọnọdụ a ga-aga n'ihu na oge na-abịanụ.
Railway Transport Onodi (Iwusi Intermodal Transport na Turkey n'ime akporo nke EU oru ngo) 19 / 09 / 2013 Iwusi Intermodal Transport na Turkey EU Project Akporo Okporo ígwè Transport Onodi: The Ministry of Maritime Transport na Communications Ministry of Transport ekenịmde ke imekọ ihe ọnụ na Spain "Iwusi Intermodal Transport na Turkey Twinning Project 2. N'ihe dị iche iche nke ntinye Nkwadebe nke Ụgbọ njem Ụgbọala Iwu Iştir, a na-eme nzuko onodi na ası Railway Transportation na 18 June 2013 na Ankara. 2 nke oru ngo. Ebumnuche nke akụrụngwa bụ ịmepụta usoro iwu iwu maka ịme njem na mbubata. Ndị ọkachamara, ndị ọkà okwu na ndị nnọchianya nke ụgbọ okporo ígwè Turkey bụ ndị na-elekọta Spanish. Na ogbako, Turkey ga-etinyere ndị ụgbọ okporo ígwè, nke ga-enye ihe kwalite intermodality kacha adabara jikoro ọnụ ...
Ụgbọ njem okporo ụzọ na ọnọdụ ihu igwe ọjọọ 22 / 03 / 2013 Ụgbọ njem okporo ụzọ na ọnọdụ ojoo ojoo Ọ dị mkpa ka ịmepụta ebe dị ndụ na-adị ọcha ma dị ọcha maka ọdịnihu dị mma, ọdịnihu dị mma na-eduzi atumatu na itinye ego na-arụ ọrụ n'ime ụwa dum. A ghọtara na ụzọ isi nweta ihe ndị a na mpaghara nchịkọta ọnụ nwere ike ịnweta ohere zuru oke ma dị irè nke njem ụgbọ okporo ígwè. N'ebe a, mba EU emeela ka akụkụ ego ha dịkwuo mma ma mụbaa arụmọrụ ha site n'inye nchịkwa aka na njikwa dịka nsonye 91 / 440 nke Council of Europe metụtara alaka mpaghara ụgbọ okporo ígwè. European Union; ele anyi anya na njem di ka isi ugbua nke aku na uba ugbua, ma gbalie ime ka atumatu ahia di iche iche kwadoro uzo uzo uzo uzo uzo uzo, uzo uzo ozo, na uzo ozo.
Nzaghachi Gọvanọ Bilecik: 'Gịnị kpatara na ị gaghị ekwupụta ihe adịghị ike na ụzọ ahụ?
ShipsGo, Digital Platform of the Container Transport Industry, Na-agba ya afọ atọ
Ndị nnọchiteanya nke TCDD Transport and Logistics Sector zutere
Ọdịnihu nke Turkish Transport Sector na Digitalization
Ụgbọ njem ụgbọ mmiri na-ere ahịa na ụwa Bursa
BTSO na-aga n'ihu na-arụ ọrụ maka ikuku ụgbọ okporo ígwè
BTSO Logistics Inc. amalite njem ụgbọelu na Yenişehir